गायक जीवन शर्मालाई बालुवाटारमा बोलावट – Khabar Silo
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनवादी गायक जीवन शर्मालाई आइतबार दिउँसो आफ्नै निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् ।जनगायक शर्माका छोरा निर्मल आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग भेट गरेका हुन् । शर्माका माइला छोरा आचार्यको अन्न नलीमा हाडले प्वाल पारेपछि उनी उपचाररत छन् ।शर्माका छोराको विषयमा अनलाइखबरमा समाग्री प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे चासो दिएका हुन् ।
शर्मासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्न गर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘छोरालाई जसरी हुन्छ, बचाउनु पर्‍यो । सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुहोला ।’
भेटका क्रममा गायक जीवन शर्माले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी लिएका थिए । भेटमा शर्माले तत्कालका लागि सहयोगको आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए ।
काठमाडौं । समाजसेवा केका लागि गर्ने ? ‘समाजसेवी’ पहिले यो कुरामा स्पष्ट हुनु जरूरी छ । अरूको देखासिकी गरेर समाजसेवा गर्ने कि नाम, चर्चा र ख्यातिको मोहमा परेर समाजसेवाको ढोँग रच्ने ? फगत आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्ने कि कुनै आश–अपेक्षा नराखी मनदेखि नै गर्ने ?एक वास्तविक समाजसेवीमा सेवाकर्मबाट आउने कुनै पनि प्रतिफलको लालच भने हुँदैन, हुनुहुँदैन […]
एजेन्सी । फिल्मी दुँनियासँग जोडिएका स्टारहरुको कार क्रेज त सबैलाई थाहा छ । उनीहरु महंगामहंगा लक्जरी कारहरु चढने गर्छन् तर तपाईलाई यो थाहानहुन सक्छ साउथका मलायलम र तमिल फिल्मका सुपरस्टार ममुटीसँग एक दुई मात्रै होइन उनीसँग ३६९ वटा कार छन्। यतिमात्रै होइन् ममुटीले केहीवर्ष पहिले भारतको पहिलो मारुती८०० पनिकिन्नृे इच्छा व्यक्त गरेकाथिए । ममुटीले आफ्नाकारहरु […]